Tigraay Deebitee Addunyaa Waliin Qunnamtii Qabaachuu Qabdi: Gamtaa Awurooppaa
FAAYILII - Alaabaa Gamtaa Awurooppaa
Mootummaan Itiyoophiaa bulchiinsii naannoo Tigraay addunyaa waliin akka wal qunnamtuu akka taasisuuf gamtaan Awurooppaa gaafatee jira. Kunis waggaa tokkoof uggurrii hangi tokko ka’amee uummata hanqiina nayaataan rakkatan kan Tigraay kanneen Miliyoona tokko ta’aniif gargaarsii nyaataa kuusaa keessaa sababaa dhabamuu boba’an akka hin raabsamnee eega taasisee booda.
Komishinarri gamtaa Awuroopaa kan gargaarsa dhala namaa fi waa’ee rakkoolee mudatan hordodfuu kan ta’an saneez Lenarchich akka jedhanti, dhiyeenya kanaa kaasee, lakoobsii kokolaataa gargaarsa fe’anii Tigraay dhaqqaban dabaluun waan gaarii akka ta’e garu, gamtaan Awuroopaa Itiyoophiyaa ishee uummata Miliyoona 100 fi Miliyoona 15 qabdu waliin hariiroo qabu iddotti deebisuuf waan barbaachiisan kan biroon hojjatamu akka qaban hubachiisan.
Kunis taajaajiillii Baankii, eleektrikaa fi teeleekomunikeeshinii walitti bu’iinsa humnootii Tigraayii fi motummaa Fedeeraalaa giddu tureen kan ka’e waggaa tokkoo fi walakkaaf akka citeetti jira.Kunis akka cufameetti turuu isaaf sababaan arguu hin jiru jedhan.
Tigraayiin hanga tokko cufuun walitti bu’iinsa baatii 19 booda Uummata gargaarsa dhala namaa eeggatu Miliyoona 5.2 dhaqqabuuf yaalii ta’u gufachiisuu dha jedhan.
Mootummaan Itiyoophiyaa boba’aa fi maallaqnii akka Tigraay hin dhaqqabneef ugguura kaa’ee akka kaasu, tooftaa ittiin to’atan hojii irra olchuun sodaa mootummaan qabu kan boba’aa humnootiin Tigraay hojii qaraanaaf oolchu jedhu hambisuu dandaa’aa jecdhan Larchcic
Humnootiin Tigraay Maqalee deebisanii eega qabatanii booda, Tigraay harka caalaan Itiyoophiyaa waliin qunnamtiin jiru cite jira.